Afartii dugsiba mid ayaa ku liita waxbarashada afka hooyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Alketa Pupovci, Altina Dobreva, Albina Maxhuni, Albin Hajdini, Deotrin Muli, Leon Hoxha, Valmir Sahiti iyo macallimaddooda Sylmene Bogiqi. Sawirle: Sveriges Radio
Afartii dugsiba mid ayaa ku liita waxbarashada afka hooyo
La daabacay tisdag 25 februari 2014 kl 15.06
Mid ka mid ah afartii dugsi oo dalka ku yaal ayaan ku gudbin derejada laga rabo waxbarashada afka hooyo. Sidaasna waxaa lagu muujiyey daraasadeedii ugu dambeysey oo ay hay’adda kormeerka dugsiyadu ku sameysey in ka badan 850 dugsi oo ah kuwa hoose/dhexe sannadkii la soo dhaafay. Ardayda badan oo dugsiyadaas dhigata ayaan ama helin waxbarid ku filan ama gebi ahaanba loo diidaa in ay bartaan afkooda hooyo.
- Waxay u badan yihiin arday aan helin waxbarashada afka hooyo macallimiin la’aan awgeed. Dhibaato kale oo jirta ayaa ah in uusan hoggaanka dugsigu mas’uuliyad weyn iska saarin barashada afka hooyo. Waana arrin aad u xun mar haddii aysan ardaydu helin waxbarashadaas oo ay xaqa u leeyihiin, waayo barashada afka hooyo wuxuu muhiim u yahay horumarka iyo guulaha laga gaarayo maaddooyinka kale. Sidaasna waxaa yiri Tommy Lagergren, madax-waaxeed ka hawlgala hay’adda kormeerka dugsiyada.
Waxbarashada afka hooyo ayaa muddo ah la soo lutineysey hannaan waxbarasho oo liita. Sida laga soo xigtay tirakoobka ka soo baxay wakaaladda dugsiyada in ku dhow boqolkiiba konton oo qura ardayda dugsiyada oo xaqa u leh in ay dusgiyada hoose/dhexe ku dhigtaan barashada afka hooyo ayaa run ahaantii dhigata afka hooyo.